Momba anay - Fangda Packaging Co., Ltd.
Fangda Packaging, natsangana tamin'ny 2003, no mpamokatra valopy fonosana fonosana ao Shina voalohany, ary androany izahay no mpanamboatra sy mpanondrana lehibe indrindra ao amin'ny faritra Azia-Pasifika.
Ny vokatrao lehibe indrindra dia misy ny valopy feno fonosana, kitapo Courier (mailer Poly), Mpanaparitaka Bubble, Labels Thermal Direct, Thermal Transfer Labels ary Thermal Paper Rrolls.
Ilay orinasa maoderina vaovao mitazona 60000 metatra toradroa mahery, mpiasa efa ho 500 no miasa eto. Fangda dia manana milina sy fotodrafitrasa maherin'ny 100 ao anatin'izany ny extruders PE, famoahana taratasy sy lakaoly 、 mpanova, milina fanontam-pirinty, slitters ary andiana toby fanandramana lab, sns.
Hitanay ny fampidirana mitsivalana an'ireo fizotran-javatra rehetra tafiditra amin'ny famokarana ny vokatray, toa ny famokarana adhesive, ny taratasy vita amin'ny silika, ny fonosana amin'ny adhesive, ny fitrandrahana sarimihetsika ary ny fanovana. Ireo hetsika rehetra voalaza etsy ambony ireo dia miasa ao anatin'ny atrikasa misy anay izay manamora ny fitantanana ny famokarana, ny fihenan'ny vidiny ary ny fanaraha-maso QC.
Ankoatr'izay, Fangda dia manana laboratoara R&D tena mandroso sy teknisianina matihanina izay nibanjina hatrany ireo vokatra teknolojia vaovao miaraka amin'ny famoronana sy fanavaozana. Hatramin'izao, ny orinasa dia manana patanty famoronana 5 sy fanamarinana ISO9001; ny vokatra dia nandalo ny fitsapana REACH ihany koa.
Ny sandan'ny FANGDA dia ny "Ny kalitao no ain'ny orinasa". Avy amin'ny fisafidianana ny akora hanaterana ny entana any amin'ny seranana, ny fomba fanao tsirairay dia nozahan'ny departemantan'ny fanaraha-maso kalitao. Mandritra izany fotoana izany dia mampiasa ny rafitra ERP, OA, CRM ny FANGDA hanatsarana ny fahombiazan'ny asa, hampihena ny fako taratasy, hahatanteraka ny birao maintso.
Ny traikefa ananantsika sy ny hafanam-ponay amin'ny fampivelarana ny mpanjifa manerantany dia ahafahanay mitombo haingana sy milamina. Hamafisina bebe kokoa ny fifandraisanay amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa mandresy fandresena.